Wakazara Chinyorwa Chezvikanganiso Nekuda kweMS Access Dhatabhesi Uori
musha Products DataNumen Access Repair Zadza Rondedzero Yezvikanganiso
Zadza Rondedzero Yezvikanganiso Nekuda kweMicrosoft Access Dhatabhesi Corruption
Paunoshandisa Microsoft Access kuvhura dhatabhesi Yekuwanika ine huwori, iwe uchaona akasiyana mameseji ekukanganisa, izvo zvingave zvichikuvhiringidza kwauri. Naizvozvo, pano isu tichaedza kunyora zvese zvingangoitika zvikanganiso, zvakarongedzwa zvinoenderana neyakaitika frequency. Pane kukanganisa kwese, isu tinotsanangura chiratidzo chayo, tsanangura chikonzero chayo chaicho uye topa muenzaniso faira pamwe chete nefaira rakasungirirwa neyedu Yekutora yekushandisa turu DataNumen Access Repair, kuti iwe ugone kuvanzwisisa zviri nani. Pazasi isu tinoshandisa 'filename.mdb' kuratidza yako yakashata Yekuwana MDB faira zita.
Risingazivikanwe Dhatabhesi Fomati 'filename.mdb' (Kanganiso 3343)
Iyo dhatabhesi 'filename.mdb' inoda kugadziriswa kana isiri dhatabhesi faira. (Kanganiso 2239) Iwe kana mumwe mushandisi mungangove musingatarisiri kusiya Microsoft Office Access nepo Microsoft Office Access dhatabhesi yakavhurwa. Iwe unoda here kuti Microsoft Office Access iedze kugadzirisa dhatabhesi?
Iyo Microsoft Jet database injini haina kuwana chinhu 'xxxx'. Ita shuwa kuti chinhu chiripo uye kuti iwe unoperetera zita raro uye zita renzira nenzira kwayo. (Kukanganisa 3011)
Haikwanise kuvhura dhatabhesi 'filename.mdb'. Inogona kunge isiri dhatabhesi iyo yaunobvumirwa nesarudzo yako, kana iyo faira inogona kunge iine huwori. (Kukanganisa 3049)
Iwe hauna mvumo inodiwa yekushandisa iyo 'filename.mdb' chinhu. Ita kuti wako manejimendi manejimendi kana munhu akagadzira chinhu aise mvumo yakakodzera iwe. (Kukanganisa 3033)
Risiri rudzi rwemunda wedhata (Kanganiso 3259)
Kanganiso isingatarisirwi 35012
Shanduko dzawakumbira patafura hadzina kubudirira nekuti dzaizogadzira zvakapetwa kukosha mune indekisi, yekutanga kiyi, kana hukama. (Kukanganisa 3022)
Microsoft Access yakaona kuti dhatabhesi iyi iri mune zvisingaenderane nyika, uye ichaedza kudzoreredza dhatabhesi. Panguva iyi, kopi yekuchengetedza dhatabhesi ichaitwa uye zvinhu zvese zvakadzorerwa zvichaiswa mudhatabhesi nyowani. Kuwana kuchazovhura iyo nyowani dhatabhesi. Mazita ezvinhu zvisina kuburitswa zvinobudirira anozotorwa mutafura ye "Kudzorera Zvikanganiso". (Kukanganisa 9505)
Microsoft Access bvunza password kana uchivhura dhatabhesi yakaora.
Dhatabhesi haigone kuvhurwa nekuti chirongwa cheVBA chirimo hachigone kuverengwa. Dhatabhesi inogona kuvhurwa chete kana chirongwa cheVBA chikatanga chadzimwa. Kubvisa chirongwa cheVBA kunobvisa kodhi dzese kubva kuma module, mafomu uye mishumo. Iwe unofanirwa kutsigira dhatabhesi yako usati waedza kuvhura dhatabhesi uye kudzima chirongwa cheVBA. (Kukanganisa 29081)
'Id' haisi index mune ino tafura. kana 'AOIndex' haisi indekisi iri patafura. (Kukanganisa 3800)
Kwete bhukumaki rinoshanda. (Kukanganisa 3159)
Yakachengetedzwa kukanganisa (- ####); hapana meseji yekanganiso iyi. (Kukanganisa 2626/3000)
Iyi faira inogona kunge isina kuchengetedzeka kana iine kodhi yaive yakagadzirirwa kukuvadza komputa yako.
Kune chako chirevo, isu tinotora runyorwa ruzere rweMakanganiso ekuwana eakasiyana maVhezheni shanduro:
Yakazara Rondedzero Yekuwana 2003 Zvikanganiso
Yakazara Rondedzero Yekuwana 2007 Zvikanganiso
Yakazara Rondedzero Yekuwana 2010 Zvikanganiso
Yakazara Rondedzero Yekuwana 2013 Zvikanganiso
Yakazara Rondedzero Yekuwana 2016 Zvikanganiso